Gareth Southgate oo ka hadlay qorshaha kabtanimada ee xulkiisa,kadib ka fariisiga xulka ee Rooney
Friday, July 20th, 2018 - 00:15:51
Friday August 25, 2017 - 00:46:57 in Wararka by MM Shooble
Tababaraha England Gareth Southgate ayaa shaaca ka qaaday inuusan ku degdegi doonin inuu magacaabo kabtanka cusub ee Three Lions.
Go'aanka Wayne Rooney ee ah inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah ayaa furay booska xulka England, kabtanimada.
Wararka ayaa sheegaya in booskaas ay badali karaan xiddiga Tottenham Hotspur's Harry Kane iyo Chelsea'kabtankeeda Gary Cahill ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu cad cad ee lagu abaalmarinayo xerashada calaamadda kabtanimada ee xulka England.
Si kastaba ha ahaatee, Southgate, ayaa shaaca ka qaaday inuu sugi doono ka hor inta uusan go'aansanin kabtanka cusub ee waqtiga buuxa, iyadoo uu xiran yahay inuu kooxda ku sii faafiyo kulamada soo socda.
"Kama fariisan doono kabtanimada, waxaan ku fidin doonaa kooxda haatan, sidaasi darteed muhim ayay u tahay dadka kale inay qaataan mas'uuliyad" ayuu Southgate u sheegay suxufiyiinta ka dib markii uu magacaabay ciyaartoydii ugu dambeysay ee England.
England ayaa sii wadi doonta ololaha isreebreebka koobka adduunka 2018 ka dib markii ay la ,ayagoo la ciyaaraya Malta 1da September, ka hor inta aan la aadin Slovakia 4-ta September.